Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UWuxin Wasedolobheni laseTaiyuan, esiFundazweni saseShanxi
Into esasilokhu siyixoxa ekuhlanganyeleni kwangaphambilini yizindlela ezahanjwa nguPetru noPawulu. Kuthiwa uPetru wayenake ukuzazi yena noNkulunkulu, futhi wayengumuntu uNkulunkulu ayethokoza ngaye, ngenkathi uPawulu yena wayenaka umsebenzi wakhe kuphela, isithunzi sakhe nokuhlonishwa kwakhe emphakathini, futhi-ke wayengumuntu uNkulunkulu ayemnyanya. Selokhu ngangesaba ukuhamba indlela kaPawulu, nokuyingako ngivame ukufunda amazwi kaNkulunkulu mayelana nezinto ahlangabezana nazo uPawulu ukuze ngibone ukuthi wafika kanjani ekumazini uNkulunkulu. Emva kokuphila ngale ndlela isikhathi eside, ngabona sengathi ngase ngingolalelayo kakhulu kunakuqala, intshisekelo yami yokuthanda ukuthathelwa phezulu emphakathini yancipha, kanye nokuthi ngase ngizazi kangcono. Ngalesi sikhathi, ngangikholwa ukuthi yize noma ngangingakangeni ngokugcwele endleleni kaPetru, kwakungashiwo nje ukuthi okungenani ngase ngihamba eduze kwayo, okungenani lokhu kwakuchaza ukuthi ngase ngisukile kwekaPawulu. Noma kunjalo, ngangisazoba namahloni lapho ngizwa izambulo zamazwi kaNkulunkulu.
Kwathi ngokunye ukusa, lapho ngangizifundela amazwi ami enkuthazo yasekuseni, ngabona amazwi alandelayo kaNkulunkulu: “Umsebenzi kaPetru wawuwumsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Akenzanga indima yomphostoli, kodwa wasebenza ngenkathi efuna ukuthanda uNkulunkulu. Inkambo yomsebenzi kaPawulu yayibandakanya nezinto ayezifuna…. Azikho izinto adlula kuzo mathupha emsebenzini wakhe—konke kwakungenxa yakho, akwenzekanga ngenxa yokufuna inguquko. Yonke into emsebenzini wakhe yayinokuhweba, yayingabandakanyi umsebenzi noma ukuthoba kwesidalwa sikaNkulunkulu. Phakathi nenkambo yomsebenzi wakhe, alukho uguquko olwenzeka esimweni esidala sikaPawulu. Umsebenzi wakhe wawungukukhonza abanye, futhi wawungakwazi ukuletha izinguquko esimweni sakhe. … UPetru wayehlukile: Wayedlule ekuthenweni nasekuthini kubhekanwe naye, futhi wayecwengiwe. Injongo nesisusa somsebenzi kaPetru kwakwehluke kakhulu kokukaPawulu. Nakuba uPetru engenzanga umsebenzi omkhulu kakhulu, isimo sakhe sedlula ezinguqukweni eziningi kakhulu, futhi ayekufuna kwakuyiqiniso noguquko lwangempela. Umsebenzi wakhe wenziwa ngesizathu esimayelana nomsebenzi” (“Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu awuthinta umoya wami ngase ngiyathula cwaka: UPetru wayengumuntu owagcwalisa isibopho sakhe njengesidalwa esidaliweyo. Wabhekana nale ndlela yokufuna ukuthanda uNkulunkulu esikhundleni sendima yakhe njengomphostoli. Kodwa ingabe ngangingumuntu owayegcwalisa izibopho zakhe njengesidalwa noma ngangenza umsebenzi wami njengomuntu osebenzayo? Ngalesi sikhathi, ngacabanga emuva ezimweni ezahlukene ezadlula: Lapho ibandla lalinomsebenzi omkhulu okwakufanele liwenze, abanye odade nabafowethu babethi: Ngempela nithwele kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu. Ngaphubuka ngathi: Thina baholi asinayo enye indlela ngaphandle kokuba sibhekane nawo. Kwesinye isikhathi, emindenini esingethe izihambeli noma phambi kwabalingani basemsebenzini, ngingathanda ukucabangela umzimba wami futhi ngizinike isikhathi sokunethezeka, kodwa futhi ngibuye ngicabange: Cha, ngingumholi, kufanele ngiphile njengomuntu ojwayelekile hhayi ukuzitika nokukholisa inyama. Ngenkathi ngizizwa ngingalangazelele ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ngangibuye ngicabange ukuthi: Njengomholi, uma ngingadli futhi ngingaphuzi amazwi kaNkulunkulu, pho ngizokwazi kanjani ukusombulula izinkinga zabanye abantu? Kwesinye isikhathi ngangiye ngihambe nomlingani engisebenza naye siye emndenini omsingathile, futhi uma ngibona ukuthi udade omsingethe indlela angiphathe ngayo beyingenamdlandla njengaleyo aphathe yena ngayo, nginengeke: Kungenzeka awungazi ukuthi ngingubani, empeleni ngingumholi wakhe. Kwesinye isikhathi, ngenxa yesizathu esithile, ngangiye ngizizwe ngingathandi ukuxoxisana nabafowethu nodade abasingethe izihambeli, kodwa futhi ngibuye ngicabange ukuthi: Njengomholi, ngizobonakala kanjani ebantwini uma ngifika phakathi kwabo kodwa ngingaxoxi nabo? Njengoba ngingumholi kufanele ngixoxisane nemindeni esingethe izihambeli. … Lezi zindlela zokuziphatha ezahlukene zangenza ngabona: Ngangisebenza ngenxa yesikhundla emphakathini. Noma ngabe kwakungukuxoxisana nabantu, ukuhambela imihlangano, noma ukuphatha izindaba ezijwayelekile, konke kwakungenxa yokuthi ngangingumholi okwangenza ngizizwe ngiphoqelekile ukugcwalisa ezinye zezibopho zami kanye nokwenza omunye umsebenzi. Ngangingagcwalisi izibopho zami njengesidalwa esidaliweyo, futhi nangaphezulu ngangingasebenzi kule ndima yami yokuthanda uNkulunkulu njengalokhu uPetru naye ayenzile. Uma izinto bezingaqhubeka njengaphambilini, mhla lufika usuku lokuba ngixoshwe futhi sigcwaliswe isikhundla sami, mhlawumbe bengingeke ngiqhubeke nokugcwalisa izibopho zami njengalokhu ngenza manje. Kwaba lapho-ke lapho ngabona khona ukuthi ngangingeyena umuntu owayenza iqiniso noma owayecabangela intando kaNkulunkulu. Kunalokho, ngangiyigwala elinyanyekayo elalifuna kuphela isikhundla kanye nedumela emphakathini. Akunakwenzeka neze ukuba uthembeke kuNkulunkulu ube usebenza ngendlela engangikade ngisebenza ngayo ngoba phela kwakungukugcina icala nje kuphela. Ngangingazimisele ukuphila iqiniso futhi ngicabange intando kaNkulunkulu, ngoba “konke kwakungenxa yakho, akwenzekanga ngenxa yokufuna inguquko.” Kwakungenzeka kanjani ukuthi umsebenzi onjengalona wenelise intando kaNkulunkulu? UPawulu wayesebenza esikhundleni sakhe njengomphostoli; umsebenzi wakhe wawugcwele izenzo ezifana neso ngeso. Ngangisebenzela ngikhokhela isikhundla sami njengomholi. Pho izinhloso nezinjongo ezinjena zokukholwa kuNkulunkulu zehluke kanjani kwezikaPawulu?
Kulesi sigaba, ngawa phansi phambi kukaNkulunkulu: O Nkosi! Ngiyabonga ngensindiso Yakho efike ngesikhathi, efike yangiphaphamisa ekugqilazekeni engangikukhona, ngabona isimo sami njengoba sinjalo, futhi ngabona ukuthi ngangisahamba indlela kaPawulu uMfarisi. Umsebenzi wami nokugcwalisa izibopho zami kwakufana ncamashi nokwabaFarisi, okufanele ukuthi kwakukwenyanyisa Wena. O, Nkulunkulu Somandla! Ngizimisele ukuphenduka ezinhlosweni nezinjongo zami ezingalungile ngaphansi kokulawulwa yizwi Lakho. Ngizimisele ukugcwalisa izibopho zami njengesidalwa esidaliwe futhi ngilandele isibonelo sikaPetru ngokwenza lokho okufanele ngikwenze ngenxa yendlela yokuthanda uNkulunkulu, ngingabe ngisasebenza esikhundleni sami sendima yobuholi, futhi ngenze konke okusemandleni ukufuna kanye nokuya phambili endleleni kaPetru!
Okwedlule: Ingqikithi Yokusebenzisa Kabi Amandla Ukuze Uziphindisele
Okulandelayo: Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
UZhou Li Edolobheni LaseXintai, Esifundazweni iShandong Kudala, sasidinga ukuhlukanisa izifunda endaweni yethu, kodwa ngokwemigomo...
Kumanje kuphela lapho sengiqonda ukuthi uma ngifisa ukuqonda isimo sikaNkulunkulu, kufanele ngizame ngamandla ami onke ukufuna nokuqonda iqiniso eliqukethwe umusho ngomusho kaNkulunkulu. Ngale ndlela, nakanjani ngizohlomula kakhulu. Kusukela namuhla kuya phambili, ngifisa ukugcila ekuzimiseleni kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu, futhi ngifune ukuba masisha ngibe yilowo onokumqonda uNkulunkulu.
UHuimin Edolobheni LaseJiaozuo, Esifundazweni SaseHenan Njalo lapho ngibona noma ngizwa ngomuntu osusiwe esikhundleni njengomholi futhi...
UYang Le Edolobheni laseWuhai, Maphakathi neSizinda saseMongolia Esizimele Ngenkathi ngisafunda isikole, ubaba wagula wabe eseshona. Emva...